kafe any an-
Loko mifono hery
Fitaovana ambony latabatra
Momba an'i Artie
Mpanorina & filoha
Artie dia naorin'i Arthur Cheng tamin'ny taona 1999.
Miaraka amin'ny ekipa mpamorona endrika iraisam-pirenena mahazo loka, ny fitiavan'ny Artie dia namorona endrika am-boalohany maro ary manana patanty eran-tany mihoatra ny 80.
Miaraka amin'ny departemanta R&D efa za-draharaha sy mpanao asa-tanana mahay, velona ny famolavolana ARTIE amin'ny alàlan'ny famolavolana azy ireo miaraka amina politika sy fomba fifehezana kalitao tena henjana ... ...... Fiantohana fitsirihana amina sehatra maro.
Artie's Polyethylene polythylene high density synthetic and non-fading wicker fibre dia manome antoka ny fiainana lava tsy azo antoka amin'ny UV, Chlorine ary rano sira. Ny fonosana vita amin'ny aliminioma feno fonosana sy vovoka feno volo dia miantoka faharetana manohitra ny fanodikodinana sy fikorisana.
Handroso hatrany isika hanenjika ny nofinay ary hahatonga an'i Artie haharitra zato taona na mihoatra.
FIKAROHANA & FAMPANDROSOANA
Pellets polyethylene kely no serial mat matotra.
Raha vao nafanaina amin'ny maripana marina, ireo granulate voarendrika dia nalaina tamin'ny alàlan'ny fantsom-panafody isan-karazany izay mamorona endrika sy haben'ny fibra isan-karazany izay tsy misy poizina, tsy manimba ary 100% azo averina.
Izahay dia manandrana endrika, habe ary firafitra an-jatony, na malama na marokoroko na fisaka na boribory, dia mandalo dingana maro ny fibra. Ny fanandramana amin'ny haben'ny extruding avy amin'ny 2.5 mm ka hatramin'ny 40 mm ary ny fampivelarana ny loko mety dia ampahany amin'ny fampandrosoana Artie Fiber.
Vantany vao vita dia notsapaina tamin'ny alàlan'ny masinina sy masoivoho voahitsy ireo fibra rehetra mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fitakiana ny tontolo iainana ny vokatra vita ary tsy azo antoka ny fanjavonan'i UV, ny fandravahana, ny klôro ary ny rano masira.
Nofanin'ireo mpanenona tompony sy nampiasa teknika avy any Filipina, Indonezia ary ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, ireo mpanenona anay dia manana ny lazany ho tsara indrindra eto an-tany.
Ny ekipa mpamolavola anay sy ny mpitantana dia miara-miasa akaiky amin'ny departemanta mpanenona anay mba hampivelatra ireo sanganasa tsy manam-paharoa.
Miezaka izahay amin'ny famoronana tontolo iainana mahafinaritra sy ekipa ary mahafinaritra. Ny departemanta manenona manam-pahaizana dia miavaka ary mirehareha amin'ny varotra tokana ataon'izy ireo. Ny fomba fanaraha-maso dingana marobe dia miantoka ny kalitao.
Ny polyethylene avo lenta synthetic sy tsy mihena wicker fibre dia manome antoka ny fiainana lava tsy azo antoka UV, klôro ary sira rano.
ALUMINUM & FRAMES
NOHO NY FIVORIANA ARY NOHO NY FANOHARANA, TSY MISY FITSIPIKA NY VOLA NY ALUMINIASA MARINA GRANDE ARTIE ARANA MAIMAIM-POANA NY MAINTENENSA.
mifanentana amin'ny loko miloko
tsy mifoka amin'ny
Room 301 & 302, No. 9 Shangchong NanYue Street,, distrikan'i Haizhu, Guangzhou, Sina 510220
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra mafana ,Sitemap ,AMP Mobile